(Keyd)Daawo: Soomaalidii Oslo 1990-kii : Yaad ka garatay? - NorSom News
(Keyd)Daawo: Soomaalidii Oslo 1990-kii : Yaad ka garatay?
28-kii bishii April sanadkii 1990, kahor inta uusan dhacin taliskii madaxweyne Siyaad Barre, waxaa magaalada Oslo kulan suugaaneed ku qabtay Abwaan Maxamed Warsame Hadraawi. Waxaana sida aad arki karto muuqaalka hoose muuqday xiiso aad u badan oo ay soomaalidu xiligaas u qabtay suugaanta iyo dhaqanka soomaalida.
Waxaa muuqaalka hoose ka muuqdo qeybo kamid ah bulshadii soomaaliyeed ee xiligaas ku noolaa magaalada Oslo, kuwaas oo qaarkood ay noqdeen ama wali hayaan xilal iyo shaqooyin muhiim ah, Norway gudaheeda iyo dalalka kale ee caalamkaba.
Previous articlePST oo xabsiga dhigtay nin lala xiriirnayo kiiskii wadaadka Krekar.
Next articleAarhus: 61 oo kamid ah 78 qof oo covid-19 laga helay, waa soomaali!!.